21 ဇူလိုင်၊ 2021
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါလိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မြင်ကွင်း။
ကိုဗစ်ကူးစက်သူ၊ သေဆုံးသူတွေ တိုးလာနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ဒီနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့ က စတင်ပြီး stay-at-home မလိုအပ်ရင် အိမ်ပြင်မထွက်ကြဖို့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA က ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးနောက် ရခိုင်ပြည် နယ်မှာ အပြင်ထွက်သူ မရှိသလောက်နည်းသွားပြီး ယာဉ်တွေနဲ့ ဈေးဆိုင်တွေလည်း ပိတ်ထားကြတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ရန်ကုန်က လာတဲ့သတင်း ကိုသားညွန့်ဦး ပြောပြပါမယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် မလိုအပ်ရင် အပြင်မထွက်ဖို့နဲ့ ကိုဗစ်စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာကြဖို့ ULA/AA ရခိုင့်တပ်မတော်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ရခိုင်တစ်ပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတားနဲ့ လိုက်နာကြတာကို တွေ့ရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိရာ အမ်းမြို့နယ်မှာတောင်မှ ULAရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်း လိုက်နာကြတယ်လို့ အမ်းဒေသခံ ကိုမျိုးလွင်က ပြောပါတယ်။
“ “ULAကထုတ်တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်မှာတော့ အမ်းဒေသခံ အများစုက လိုက်နာကြတာကို တွေ့ရတယ်။ လိုက်နာကြတယ်ဆိုတာက ကျနော်တို့ မြင်ရတာက လူတိုင်းနီးပါးက Mask တပ်ကြတယ်။ တစ်ရွာနဲ့ တစ်ရွာ အုပ်စုအတွင်း သွားလာခွင့်ရှိပေမယ့်? ရွာအဝင်အထွက်တွေမှာတော့ လက်ဆေးရတယ်။ Mask တပ်ရတာတွေရှိတယ်။ ကိုယ့်အုပ်စုကလွဲပြီး တစ်ခြားကျေးရွာ အုပ်စုတွေကို သွားမယ်ဆိုရင်တော့ အကန့်အသတ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ အုပ်စုအတွင်းသွားလာခွင့် ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ညအိမ်တည်းခိုတာတွေတော့ မရဘူးပေါ့။”
ရခိုင်တပြည်လုံး မလိုအပ်ရင် အိမ်ပြင်မထွက်ဖို့ AA ထုတ်ပြန်သတိပေး
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းက ကျောက်တော်မြို့နယ်မှာလည်း အပြင်ထွက်သူတွေ သိသိသာ သာနည်းသွားပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြေးဆွဲနေတဲ့ ယာဉ်လှိုင်းတွေလည်း ပိတ်ထားတယ်လို့ ကျောက်တော်ဒေသခံ ကိုကျော်လှမြင့်က ပြောပါတယ်။
“ AAက Stay-home ထုတ်လိုက်တဲ့အပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေက ဒီ တအားလိုက်နာကြတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အရင်နေ့တွေထက် စာရင်တော့ ဒီနေ့က အကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကို ရောက်သွားပြီးလို့တော့ ကျနော်တို့ မြင်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ နှစ်ပတ်ဆက်တိုက်ရှိမယ်ဆိုရင် လက်ရှိကူးစက်နေတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်ဗျ ”
ဒါအပြင့် မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာလည်း ကျေးရွာအဝင်အထွက်တွေ ပိတ်ထားသလို မြို့ပေါ်မှာ လည်း ဈေးဆိုင်တွေ ပိတ်ထားတာရှိပြီး လူသွားလူလာတွေလည်း မရှိသလောက်နည်းသွားတယ်လို့ မြောက်ဦးမြို့နယ် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးထွန်းသာစိန်က ပြောပါတယ်။
“ တော်တော်များများ သက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ ပြောရမှာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ အခုမြေပြင်အခြေအနေမှာက မနေ့ကနဲ့ ဒီနေ့ စာရင်တော့ ဒီနေ့က အသွားအလာတော် တော်နည်းသွားတယ်။ ဈေးဆိုင်တွေကလည်း ကြိုတန်းတွေ ဘာတွေ အကာအစီးတွေနဲ့ ရောင်းချနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ တစ်ချို့ဆိုင်တွေလည်း ပိတ်ထားတာကို တွေ့မြင်နေရတယ်။ ရပ်ရွာတွေမှာလည်း ဝါးတား ဂိတ်တွေဘာတွေ ချပြီးတော့ လက်သန့်ဆေးရည်ဗူးတို့ Maskတို့ တပ်ပြီးတော့ စောင့်နေကြတာကိုလည်း တွေ့မြင်ရပါတယ်။”
ရောဂါးကူးစက်မှုတွေ အများဆုံးရှိနေတဲ့ စစ်တွေ၊ မောင်တောနဲ့ ရခိုင်ပြည်တောင်ကပိုင်းက တောင်ကုတ်၊ သံတွဲ၊ ဂွ စတဲ့ မြို့နယ်တွေမှာလည်း အရင်နေ့တွေထက် စာရင်အိမ်ပြင် ထွက် သူတွေ မရှိသလောက် နည်းပါးနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပြေးဆွဲနေတဲ့ ရေကြောင်း၊ ကုန်းကြောင်းတွေကိုလည်း ပိတ်ထားကြတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် ကောင်စီဘက်ကလည်း စည်းကမ်းတင်းကြပ်ထားပြီး မလိုက်နာသူတွေကို ဖမ်းဆီးမှုတွေ ရှိနေတာပါ။ ပြည်သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးကို ထည့်တွက်တဲ့အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လောလောတယ် Stay-at-home မသတ်မှတ်ဘူးလို့ ပြည်နယ်ကောင်စီဘက်က ပြောကြားထားပါတယ်။
ရခိုင်လက်နက်ကိုင် AA အဖွဲ့ဘက်က ဒေသတြင်း ကိုဗစ် စည်းကမ်းအခုလို ထုတ်ပြန်လိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တုန့်ပြန်ချက်ရဖို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်စီပြောခွင့်ရှိသူတွေကို ဗွီအိုအေက အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ ဆက်သွယ်လို့ မရရှိခဲ့ပါဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ မနေ့ကအထိ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူ ၁,၇၀၀ ကျော်အထိရှိနေပြီး သေဆုံးသူ ၆၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ စာရင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကိုဗဈကူးစကျသူ၊ သဆေုံးသူတှေ တိုးလာနတေဲ့ ရခိုငျပွညျနယျတဈခုလုံးမှာ ကိုဗဈကပျရောဂါ ကာကှယျထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ ဒီနေ့ ဇူလိုငျလ ၂၁ ရကျနေ့ က စတငျပွီး stay-at-home မလိုအပျရငျ အိမျပွငျမထှကျကွဖို့ ရခိုငျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့ AA က ထုတျပွနျလိုကျပွီးနောကျ ရခိုငျပွညျ နယျမှာ အပွငျထှကျသူ မရှိသလောကျနညျးသှားပွီး ယာဉျတှနေဲ့ ဈေးဆိုငျတှလေညျး ပိတျထားကွတယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ ဒီအကွောငျး ရနျကုနျက လာတဲ့သတငျး ကိုသားညှနျ့ဦး ပွောပွပါမယျ။
ရခိုငျပွညျနယျမှာ ကိုဗဈ-၁၉ ကူးစကျမှုတှကေို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့အတှကျ မလိုအပျရငျ အပွငျမထှကျဖို့နဲ့ ကိုဗဈစညျးကမျးတှကေို လိုကျနာကွဖို့ ULA/AA ရခိုငျ့တပျမတျောရဲ့ ထုတျပွနျခကျြကို ရခိုငျတဈပွညျနယျလုံးအတိုငျးအတားနဲ့ လိုကျနာကွတာကို တှရေ့တယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။
အနောကျပိုငျးတိုငျးစဈဌာနခြုပျတညျရှိရာ အမျးမွို့နယျမှာတောငျမှ ULAရဲ့ ထုတျပွနျခကျြအတိုငျး လိုကျနာကွတယျလို့ အမျးဒသေခံ ကိုမြိုးလှငျက ပွောပါတယျ။
“ “ULAကထုတျတဲ့ ထုတျပွနျခကျြအပျေါမှာတော့ အမျးဒသေခံ အမြားစုက လိုကျနာကွတာကို တှရေ့တယျ။ လိုကျနာကွတယျဆိုတာက ကနြျောတို့ မွငျရတာက လူတိုငျးနီးပါးက Mask တပျကွတယျ။ တဈရှာနဲ့ တဈရှာ အုပျစုအတှငျး သှားလာခှငျ့ရှိပမေယျ့? ရှာအဝငျအထှကျတှမှောတော့ လကျဆေးရတယျ။ Mask တပျရတာတှရှေိတယျ။ ကိုယျ့အုပျစုကလှဲပွီး တဈခွားကြေးရှာ အုပျစုတှကေို သှားမယျဆိုရငျတော့ အကနျ့အသတျတှရှေိတယျပေါ့နျော။ အုပျစုအတှငျးသှားလာခှငျ့ ရှိတယျဆိုပမေယျ့ ညအိမျတညျးခိုတာတှတေော့ မရဘူးပေါ့။”
ရခိုငျမွောကျပိုငျးက ကြောကျတျောမွို့နယျမှာလညျး အပွငျထှကျသူတှေ သိသိသာ သာနညျးသှားပွီး ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ပွေးဆှဲနတေဲ့ ယာဉျလှိုငျးတှလေညျး ပိတျထားတယျလို့ ကြောကျတျောဒသေခံ ကိုကြျောလှမွငျ့က ပွောပါတယျ။
“ AAက Stay-home ထုတျလိုကျတဲ့အပျေါ မူတညျပွီးတော့ ပွညျသူတှကေ ဒီ တအားလိုကျနာကွတယျလို့ မွငျပါတယျ။ အရငျနတှေ့ထေကျ စာရငျတော့ ဒီနကေ့ အကောငျးဆုံးအခွအေနတေဈခုကို ရောကျသှားပွီးလို့တော့ ကနြျောတို့ မွငျပါတယျ။ ဒီလိုပဲ နှဈပတျဆကျတိုကျရှိမယျဆိုရငျ လကျရှိကူးစကျနတေဲ့ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကိုလညျး ထိနျးခြုပျနိုငျမယျလို့ ကနြျောတို့ ယုံကွညျပါတယျဗြ ”
ဒါအပွငျ့ မွောကျဦးမွို့နယျမှာလညျး ကြေးရှာအဝငျအထှကျတှေ ပိတျထားသလို မွို့ပျေါမှာ လညျး ဈေးဆိုငျတှေ ပိတျထားတာရှိပွီး လူသှားလူလာတှလေညျး မရှိသလောကျနညျးသှားတယျလို့ မွောကျဦးမွို့နယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးထှနျးသာစိနျက ပွောပါတယျ။
“ တျောတျောမြားမြား သကျရောကျမှုရှိတယျလို့ ပွောရမှာပါပဲ။ ဘာဖွဈလို့လညျး ဆိုတော့ အခုမွပွေငျအခွအေနမှောက မနကေ့နဲ့ ဒီနေ့ စာရငျတော့ ဒီနကေ့ အသှားအလာတျော တျောနညျးသှားတယျ။ ဈေးဆိုငျတှကေလညျး ကွိုတနျးတှေ ဘာတှေ အကာအစီးတှနေဲ့ ရောငျးခနြတောကိုတှရေ့တယျ။ တဈခြို့ဆိုငျတှလေညျး ပိတျထားတာကို တှမွေ့ငျနရေတယျ။ ရပျရှာတှမှောလညျး ဝါးတား ဂိတျတှဘောတှေ ခပြွီးတော့ လကျသနျ့ဆေးရညျဗူးတို့ Maskတို့ တပျပွီးတော့ စောငျ့နကွေတာကိုလညျး တှမွေ့ငျရပါတယျ။”
ရောဂါးကူးစကျမှုတှေ အမြားဆုံးရှိနတေဲ့ စဈတှေ၊ မောငျတောနဲ့ ရခိုငျပွညျတောငျကပိုငျးက တောငျကုတျ၊ သံတှဲ၊ ဂှ စတဲ့ မွို့နယျတှမှောလညျး အရငျနတှေ့ထေကျ စာရငျအိမျပွငျ ထှကျ သူတှေ မရှိသလောကျ နညျးပါးနတေယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောဆိုကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးပွေးဆှဲနတေဲ့ ရကွေောငျး၊ ကုနျးကွောငျးတှကေိုလညျး ပိတျထားကွတယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောဆိုကွပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးမှာ ကိုဗဈကူးစကျမှုတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ရခိုငျပွညျနယျ ကောငျစီဘကျကလညျး စညျးကမျးတငျးကွပျထားပွီး မလိုကျနာသူတှကေို ဖမျးဆီးမှုတှေ ရှိနတောပါ။ ပွညျသူတှရေဲ့ စားဝတျနရေေးကို ထညျ့တှကျတဲ့အတှကျ ရခိုငျပွညျနယျမှာ လောလောတယျ Stay-at-home မသတျမှတျဘူးလို့ ပွညျနယျကောငျစီဘကျက ပွောကွားထားပါတယျ။
ရခိုငျလကျနကျကိုငျ AA အဖှဲ့ဘကျက ဒသေတွငျး ကိုဗဈ စညျးကမျးအခုလို ထုတျပွနျလိုကျတာနဲ့ ပတျသကျပွီး တုနျ့ပွနျခကျြရဖို့ ရခိုငျပွညျနယျကောငျစီပွောခှငျ့ရှိသူတှကေို ဗှီအိုအကေ အကွိမျကွိမျ ဆကျသှယျခဲ့ပမေဲ့ ဆကျသှယျလို့ မရရှိခဲ့ပါဘူး။ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးမှာ မနကေ့အထိ ကိုဗဈကူးစကျခံရသူ ၁,၇၀၀ ကြျောအထိရှိနပွေီး သဆေုံးသူ ၆၀ ကြျောရှိတယျလို့ ရခိုငျပွညျနယျကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ စာရငျးမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
ကိုဗစ်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက် မလိုက်နာသူတွေ အရေးယူမယ် - ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်စီ
ရခိုင်မှာ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်မယ့်အရေး စိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်နေ
ရခိုင် မြောက်ဦးစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်း ကိုဗစ်ကူးစက်မှုရှိနေ